Macalin Xulka Spain Oo Ka Hadlay Barbarihii Ay La Galeen Germany Iyo Hadii Ay Tabeen Sergio Basquets %
Inuu goolka furitaanka udhaliyay wadanka Spain ciyaaryahan Rodrigo Moreno ayaa faa’ido badan siisay, ka hor inta uusan goolka bareejada ka dhalin Thomas Muller, kaasoo ciyaarta sababay inay kusoo dhamaato Bareejo 1-1.
Laakiin, hogaamiyaha qaranka Spain, ninka lagu magacaabo Julen Lopetegui wuxuu yahay mid aad ugu qanacsan bandhig ay sameeyeen wiilashiisa, isagoona cod dheer ku sheegay in laacibiintii uu garoonka kusoo aaminay ay wax badan sameeyeen.
“Germany waa wadanka aduunka ugu fiican, waxay haystaan ciyaaryahano xoog badan, kuwaasoo leh awood ay ku raaxaystaan, laakiin aniga ayaa maamulka ciyaarta hayay wax badan,” ayuu ciyaarta kadib yiri Lopetegui.
“Markii aan lumino maamulka ciyaarta waxay ahaayeen kuwa halisyo badan sameynayey, sidaas darteeda waxaan dhihi karaan ciyaartoydeena waxay muujiyeen shaqsiyadooda, waana wax aad uwanaagsan,” ayuu sii daba dhigay.
Dhanka kale, mar uu ka hadlay maqnaanshaha Sergio Basquets, kaasoo dhaawac ku seegaya kulamadaan ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in xidigii uu bedalkiisa adeegsaday oo ah Thiago Alcantara uu wax badan garoonka ka sameeyay.
“Mar hore ayaan luminay Basquets, laakiin Thiago wuxuu sameeyay wax wanaagsan intii uu garoonka ku jiray, waxaana umaleynayaa in wax walba oo ciyaarta ka dhacay ay ahaayeen kuwa wanaagsan,” ayuu daboolka ka qaaday.
“Loolanka ciyaarta natiijada iyo sida ay u halgameen ciyaartoydeena waxay ahayd wax wanaagsan, waxaana kooxdeena ay muujisay inay diyaar utahay muujinta si ay uga dhabeeyaan hamigooda,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Sergio BasquetsSpain vs Germany
Di Maria Muxuu Ka Yiri Inay Niyad Jabisay Guul Daradii CL Ee Real & Inay Sanad Xiga Isa Soo Adkayn Karaan